Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Halgamoow Ma La Qabsatay Qaab Halgameedka Cusub Ee Ogadenya & Erayada Ku haboon Marxaladan! By: Xaaji M/rashiid
Maqaal: Halgamoow Ma La Qabsatay Qaab Halgameedka Cusub Ee Ogadenya & Erayada Ku haboon Marxaladan! By: Xaaji M/rashiid
Posted by ONA Admin	/ December 25, 2018
Dalka Ogadenya ee Itoobiya ku hoos jira waxaa 60kii sano ee udambeeyay kasocday dagaal hubaysan oy gadhwadeen ka ahaayeen bulshada qeybteeda aragtida dheer oo doonayay in dadkoodu u noolaadaan sida umadaha kale ee caalamka. Mar walba waxay ku doodayeen inay dulman yihiin, balse ayna ahayn dad doonaya umad kale xaqeed. Dawladaha Aduunku way iska dhaga mariyeen hardankaas inay wax ka qabtaan iyagoo daneynaya xidhiidhka udhaxeeya iyaga iyo itoobiya.
Siyaasiyiinta Halganku waxay jeclaan jireen in arinka lagu dhameeyo xal siyaasadeed ileen dagaal duruuf umbaa keenta sida la ogyahaye! Cida mar walba diidaneyd in lawada hadlo waxay ahaayeen Talisyadii dalka haystay. Kadib markii dib uhabayn lagu sameeyay siyaasada halganka 1984 waxaa calaamad looga dhigay Qori & Qalin dhexda iskaga qodban. Waxay calamaduhu ka turjumayaan in la adeegsado kolba kii laga fursan waayo. Dagaalku sidiisaba ma’aha wax lagu dalxiiso mana jirto cid jecel dhimashada iyo dhaawaca.
Hadaan Taariikhda soo dhaweeyo markuu isbadalku kadhacay itoobiya 1991 waxaa dalka kusoo laabtay shacab farabadan oo ku maqnaa dhanakaa iyo jamhuriyadda soomaaliya. Ururka ONLF oo soomaaliya lagu asaasay ayaa kamid ahaa dadkii soo laabtay waqtigaas. Madaxdii Ururku waxay abaabuleen bulshadii iyagoo ka dhaadhicinayay Qadiyadda kadibna loo diyaar garoobay sidii isbadalka loola jaan,qaadi lahaa. Doorashooyinkii ayay ka qeyb galeen, balse nasiib darro taliskii tplf ee xaasidka ahaa ayaa cagta ku dhuftay geedii socodkii halganka ee Qalinka ku saleysnaa!
Kadib markii ay Tplf weerartay dhamaan xubnihii iyo xarumihii jabhadda ayay Duruuftu keentay in Qalinka la dhigo, Qorigana la qaato. Sidaasuu kuyimid dagaalka gacantu markii xaqiiqada lagu qotomiyo khilaafka. 24 sano kadib wuxuu dagaalkaasi galaaftay Taliskii tplf ee qalafsanaa waxaana meesha soo galay Talis soo dhaweeyay aragtiyada kale oo ay Qowmiyada Oromadu gadhwadaan. Wada xaajood ayay lagaleen dhamaan jabhadihii hubeysnaa ee ONLF kamid aheyd waana la is wada afgartay.
Halgamoow sidaa darteed waxaa is badalay qaab halgameedkii oo Qalinku hormuud uyahay. Waxaa kale oo isbadalay qaab hadalkii laftiisa. Waxaynu nahay dad wax badan dagaal kusoo jiray oo isticmaali jiray gacan kulul iyo hadal kulul. Matoorka ina saaarnaa wuxuu ahaa mid aad u xoog badan oo lamid ahaa ka Diyaaradaha. Waxaa loo baahanyahay inaynu taa fahano ruux kastaana waa inuu isku rakibo matoor xawligiisu la socdo marxaldan cusub. Kollay anigu hadaan iska warmao waxaan kamid ahay dadka ay waqiga ku qaadatay inay matoorkooda qaboojiyaan!. Si kastaba ha ahaatee waxaa goor walba mudnaanta iska leh waxa dadka iyo dalka danta u ah.
Gabagabadii waxaad ogaataan waxa madow iyo cadaan is daba maraya nin waliba dan buu leeyahay inaguna dan baan leenahay, mana soconeyso aan kugu daneysto ee waxaa soconaya aynu isku daneysano!
Xaaji M/rashiid Aw Macalim